အီးမေးလ်စာရင်းပြုစုရန်ထိရောက်သောနည်းလမ်း (၂) ခု | Martech Zone
ငါတို့ဟာအီးမေးလ်သတင်းလွှာအစီအစဉ်ကိုတက်ကြွစွာကြီးထွားအောင်လုပ်နေတယ်။ ငါဝန်ခံခဲ့တယ်၊ Martech Zone သတင်းလွှာ နေ့တိုင်း။ တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်အတွင်းမှာစာရင်းသွင်းသူ ၃၀၀၀ နီးပါးအထိတိုးပွားလာခဲ့တယ်။ ပို၍ အရေးကြီးသည်မှာ၊ ထိုအသွားအလာသည်သုံးစွဲသူများကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြော်ငြာရှင်များနှင့်စပွန်ဆာများဆီသို့ပြန်ပို့ပေးသည်။ သင့်တွင်ရှေး ဦး သူများကို ဖမ်းဆီး၍ သင်၏ဆိုက်၊ ဘလော့ဂ်သို့မဟုတ်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သို့ပြန်ပို့ရန်အီးမေးလ်ပရိုဂရမ်တစ်ခုမရှိပါကသင်အလားအလာရှိသောဖောက်သည်များစွာဆုံးရှုံးသည်။
သက်ဆိုင်ရာအဆက်အသွယ်တိုင်းထည့်ခြင်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site သို့မဟုတ်အီးမေးလ်ကတဆင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရောက်ရှိခဲ့သည်။ ဘလော့ဂ်ပို့စ်စိတ်ကူးများကို (နာရီတိုင်း) ဆောက်ရန်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်ဆက်သွယ်သည့်လူထုဆက်ဆံရေးပညာရှင်များပါ ၀ င်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ကွန်ယက်အတွင်းရှိလူတိုင်းကိုထည့်ပေါင်းခြင်း - ငါ့လိပ်စာစာအုပ်နှင့်ပင် LinkedIn မှ။ စိတ်ဝင်စားစရာကလွန်ခဲ့တဲ့ ၆ လခန့်ကထည့်သွင်းခဲ့တဲ့အီးမေးလ်ပို့နိုင်တဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ဆီကနေတုန်လှုပ်ချောက်ချားမှုကိုငါဖမ်းမိခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူကအီးမေးလ်ကို Junk folder ထဲမထည့်ခဲ့ဘူး၊ သူကအများကြီးလုပ်တတ်တယ်၊ အွန်လိုင်းမှာငါ့ကိုဖုန်းခေါ်တယ်၊ ပြီးတော့ထွက်သွားတယ်။ ) ။
၎င်းသည်အလွန်ကောင်းစွာအလုပ်လုပ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်အား၎င်းအားအလိုအလျောက်အလုပ်လုပ်စေလိုသောဆန္ဒရှိပါစေ။ ကျွန်ုပ်တွင်အတွင်းဘက်အီးမေးလ်များအားလုံးကိုစုဆောင်းပြီးထိုသူအားကျွန်ုပ်၏သတင်းလွှာစာရင်းထဲသို့အလိုအလျောက်ထည့်သွင်းနိုင်သည့်ကိရိယာတစ်ခုရှိလိုသည်။ စိတ်ဝင်စားစရာအလုံအလောက်ငါမြင်တော်မူ၏ GetResponse သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်ပလက်ဖောင်းထဲမှာဒီဆင်တူတဲ့ပေါင်းစည်းမှုကဆက်ပြောသည်သိရသည်။ လက်ျာဘက်၌ GetResponse အသုံးပြုသူများသည် ၀ ယ်ယူသူများကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ရင်းမြစ်များအားလုံးရှိသည်။
ကျွန်ုပ်၏စာရင်းပေးသွင်းသူအသစ်ကအီးမေးလ်ကိုလက်ခံပြီးမကြိုက်လျှင်? စိတ်မပူပါနဲ့ - သူတို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းပဲပယ်ဖျက်နိုင်ပါတယ်။ ဤသည်စက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်လက်ခံခဲ့သည်အလေ့အကျင့်ဖြစ်ပါတယ် ... ဒါပေမယ့်အမြဲတမ်းအကြံပေးဘူး။ သင်ဤသည်အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသည်ဟုထင်လျှင် (အီးမေးလ်ပို့ရန်ကျွမ်းကျင်သူအများစုလိုလို) ကျွန်ုပ်ဂရုမစိုက်ပါ။ ငါနှစ် ဦး စလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာကိုကြီးထွားလာသည်, site ကိုငါ့အသွားအလာတိုးပွားလာခြင်းနှင့်ငါမယုံနိုင်စရာပွင့်လင်းထိန်းသိမ်းထားခြင်းနှင့်နှုန်းထားများမှတဆင့်ကလစ်နှိပ်ပါနေဆဲ။ ကျွန်ုပ်တို့မှာ ၀% တိုင်ကြားချက်အချိုးအစားဆက်လက်ရှိပြီး၊ ကျွန်ုပ်ထုတ်ပေးခဲ့တဲ့နောက်ဆုံးသတင်းလွှာမှာစာရင်းသွင်းသူမှ ၀ င်ကြေးနှုန်းဟာ ၀.၄၁% သာရှိသည်။
အဆိုပါ အကြောင်းအရာ၏အရည်အသွေး ကျွန်တော်တို့ရဲ့သတင်းလွှာ၌တည်၏။ အဲဒါသက်ဆိုင်ပါတယ် အချိန်မီတယ် ပြီးတော့သူကသိကောင်းစရာကောင်းပြီးပညာရှင်ဆန်ဆန်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားတယ်။ ဤနောက်ဆုံးပေါ်အီးမေးလ်သည်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုပင်အားပေးအားမြှောက်ပြုခဲ့သည်။ ငါတိုင်ကြားချက်တစ်ခုတည်းမရရှိရုံသာမက၊
အဆိုပါ စာရင်းသွင်းသူအသစ်များ၏အသံအတိုးအကျယ် ငါအပတ်တိုင်းဖြည့်စွက်အလွန်သေးငယ်သည်။ ကျွန်ုပ်တွေ့ရှိသောစာရင်းပေးသွင်းသူ ၁၀,၀၀၀ ကိုကျွန်ုပ်၏သတင်းလွှာစာရင်းထဲသို့မချလိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်အပတ်စဉ်စာရင်းသွင်းသူ ၂၀ မှ ၅၀ ကိုထပ်တိုးနေသည်။ သတင်းလွှာသည်သဘာဝဖြည့်စွက်သည့်ပမာဏနှင့်တူသည်။
အီးမေးလ်စျေးကွက်အပေါ်ကျွန်ုပ်၏သဘောထားတစ်ခုလုံးကိုအမှန်တကယ်ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။ ငါ၌နှစ်ထပ်ရွေးချယ်ခြင်းမရှိတော့ပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်ပညာရှင်ပီသစွာနှင့်ဆက်သွယ်သည့်အီးမေးလ်တိုင်းကိုထည့်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးပညာရှင်များစာရင်းရရန်အချိန်တန်လားမတွေးမိအောင်ပင်ပြုလုပ်နေသည်။ ငါပြုလျှင်ငါ လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်၏စာရင်းကိုထိခိုက်ခြင်းမရှိစေရန်ဖိတ်ကြားစာတစ်စောင်ပို့ပါ။
အီးမေးလ်ရောင်းချသူတိုင်းကဒီပစ္စည်းတွေကိုသူတို့ရဲ့စုဆောင်းရာမှာဘာကြောင့်မထည့်သွင်းပေးတာလဲကျွန်တော်မသေချာဘူး။ Kudos ရန် GetResponse... ငါစာရင်းပြုစုပျိုးထောင်အတန်ငယ်မူရင်းဖြစ်ခြင်းခဲ့သည်ထင်။ ဒါဟာသူတို့ရှေ့ဆက်ဂိမ်း၏ပုံရသည်။
စက်တင်ဘာ 15, 2011 မှာ 2: 19 AM
အရမ်းရဲရင့်တဲ့စိတ်ကူးပါ။ ဒါပေမယ့်နောက်ကြောင်းပြန်လှည့်စရာ - အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အဆက်အသွယ်တိုင်းကိုခွင့်ပြုချက်မတောင်းဘဲ၊ သူတို့၏သတင်းလွှာတွင်ကျွန်ုပ်အားထည့်သွင်းလိုက်လျှင်ကျွန်ုပ်အလွန်စိတ်ဆိုးမိလိမ့်မည်။
ထပ်ထည့်ပါ၊ သင့်ခေါင်းစဉ် - သင့်အကြောင်းအရာသည်လူအများစုနှစ်သက်ရမည့်အရာဖြစ်သည်။ ဤအကြံဥာဏ်သည်စက်မှုလုပ်ငန်းအားလုံးနှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်မထင်ပါ။
စက်တင်ဘာ 15, 2011 မှာ 7: 59 AM
ခေါင်းပေါ်မှာလက်သည်းကိုရိုက်လိုက်၊ Bobbie! ဒါဟာသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ရုံသာမကပရိသတ်အတွက်တန်ဖိုးရှိရမယ်။
စက်တင်ဘာ 15, 2011 မှာ 1: 44 AM
Doug, မကြာခဏကျွန်ုပ် RSS စာဖတ်သူမှပို့စ်များကိုဖတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ဒီတစ်ခုရပ်တန့်ခြင်းနှင့်မှတ်ချက်ပေးရန်ခိုင်လုံလုံလောက်သောကြောက်မက်ဘွယ်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ 100% သဘောတူသည်နှင့်အခြားနတ်ဝင်သည်အားလုံးပေါင်းစည်းလာသောအခါ၎င်းတို့၏ထုတ်ကုန်ခက်ခဲစေရန်အီးမေးလ်က nazi ရဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုနေမကောင်းဖြစ်လာပါတယ်။